Mhlawumbe akunakwenzeka ukucabanga inqubo ukwakhiwa, okuyinto kuzolindeleka ukuba usebenzise i impahla inert. Ngoba noma yisiphi isici ukwakhiwa Umakhi akuyona into engavamile. Amagama ezifana amatshe noma isihlabathi, akuzona okuthile okukhethekile. Kodwa ngaphambi kokuthi ufike esakhiweni, zingabantu indlela ezinjengameva futhi eside.
izinto inert - it is ezenziwe ngezinto zamatshe odabuka yemvelo noma emishinini. Ngaphambi ngithola kwisayithi, basuke kusetshenzwe ngokukhethekile usebenzisa ezihlukahlukene imishini. Ukukhiqizwa kuyinto umsebenzi ngendlela evulekile. Ngokuvamile lolu hlobo zokwakha esetshenziselwa ukwakhiwa, ujantshi noma umgwaqo. Iphinde linendima ebalulekile ekwenzeni eliphezulu ukhonkolo izixazululo kanye Izingxube. Bathenga inqwaba izinkampani ukuthi ngokukhethekile womshini isakhiwo amamiksi, izixazululo ukhonkolo, kwagcizelela imikhiqizo ukhonkolo nokunye.
Inzuzo enkulu ukuthi iyiphi impahla inert ngokwakhiwa, izindleko zayo ongaphakeme. Ngokuvamile, kusetshenziswa njengendlela impahla asizayo, ukukhuthaza ukwanda isisindo yesixazululo noma inhlanganisela. Lokhu kwehlisa izindleko ukwakhiwa.
Zokwakha inert alandelayo asetshenziselwa kaningi.
Etholwe inqubo yokuwela idwala kanye rock. Cold nemithi futhi iqine. It has izakhiwo ezifana ukuminyana namanzi ukugcwaliswa. Ngokuvamile esetshenziswa ekwakhiweni ujantshi noma avtoputey, kanye nekwakha njengohlelo lwesisekelo esiqinile se ezihlukahlukene ukufaka. Ingasetshenziselwa ngokudala nokucwengisiswa landscape izingoma.
Ingxube lenzeka okuxekethile idwala ekubhujisweni. Uhlu imisebenzi lapho iqhaza okokusebenza inert omkhulu. Isihlabathi esetshenziselwa ekwakhiweni kwezakhiwo kanye zokuhamba, enqubeni nokubeka ngezidingo, eziningi zokuhlobisa nokulungisa igceke. Lena yamathebhu kakhulu ukuze kwakhiwe Izingxube ukhonkolo. Yalutho kubhekwe emgodini isihlabathi, kusukela ezingcolisa ezahlukene ingase ibe khona kuwo. Kodwa umfula isihlabathi ezikhishwe phansi machibi, kunezindlu. Ngenxa yalokho, izindleko zizoba ezibizayo nokunye okuningi.
enwetshiwe ubumba aggregate
A impahla kanye isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe, ofana imfucumfucu. It has umsindo kakhulu futhi ezishisayo ukwahlukanisa izakhiwo. It has a ukumelana amakhemikhali. Ungawesabi isikhunta noma acid. Asetshenziswa ukwakhiwa kusukela ngonyaka sixtieth kwekhulu elidlule.
Kabanzi emhlabeni wonke abakhi impahla inert. kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-ukukhiqizwa asphalt ukhonkolo izindlu nokhonkolo. Ungakwazi ayomhlangabeza izinto ezihlukahlukene zokuhlobisa. Ngokuhamba kwesikhathi ebusika ingasetshenziswa ukwehlisa isici ukushelela (wafafaza endleleni futhi eceleni komgwaqo).
Kuvamise esetshenziswa ukuze ngivumelanise umgwaqo. Ingxube ingasetshenziswa Landscaping uma kunesidingo ukuqondanisa izindawo ezinkulu. It ihlukaniswe yaba izinhlobo ezimbili: yemvelo lufinyelele ezingeni eliphezulu.
Delivery ukuze ukwakhiwa materials ngobuningi senziwa noma kusuka izimpahla noma umsebenzi wokuziphilisa. Ezokuthutha materials inert, njengoba umthetho, eyenziwa yizinkampani ezikhethekile ngayo yonke impahla edingekayo kanye nezimoto ekhethekile.
Phakathi zokuthutha wezimpahla inert kudingeka ucabangele izici abanakho. Okokuqala, zonke zibe isakhiwo luyimbudumbudu, okuyinto eyenza kungenzeki ukuziyisa zokuhamba ngemoto. Okwesibili, isidingo imishini ephambili ukuqasha zokuhamba ngenxa yokuthi umthamo wezimpahla Ingadla, ezifunela udumo kakhulu. Othile for ngcono isayithi edingekayo ambalwa amasaka emfuleni isihlabathi, futhi othile futhi ezimbili KAMAZ imfucumfucu ngeke anele ukwakha indlu ezweni.
Njengomthetho, ochwepheshe zimpahla shayela ezihambayo kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi iyiphi inert impahla ukwakhiwa, kungakhathaliseki amatshe, isihlabathi noma ubumba enwetshiwe kalula zihlakazeke endleleni. Phakathi ezokuthutha futhi kufanele bacabangele iqiniso lokuthi izinto ezahlukene has a Coefficient ezahlukene friction. ochwepheshe abanolwazi kuphela kungacacisa ukuthi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama anjalo futhi ukuqonda izici ezokuthutha elinama inert.
Ukudluliselwa kuchwepheshe ukuze ukulethwa kwezimpahla ezifana Yiqiniso, kancane ukwandisa izindleko ukwakhiwa. Kodwa ngakolunye uhlangothi, ukungazi ezicashile kanye izici of ezokuthutha izinto inert kungamenza alahlekelwe kakhulu. Njengomthetho, ochwepheshe ukuletha izimpahla ngokushesha futhi ngaphandle ukulahlekelwa endleleni. Ngaphandle ulwazi kunjalo zokuthutha ezimele kungamenza alahlekelwe kakhulu. abakhi abanolwazi bathi kungcono ukuba ngumnikazi izandla xova isixazululo eziphathekako ngesikhathi esifanayo usebenzisa imali engaphansi kwaleyo ukuze ulondoloze imali ephansi izinga self-ukulethwa wezimpahla ngobuningi.
Isayensi yamangqamuzana ezinto eziphilayo - isayensi study indima mitochondria e umzimba
Inhlangano njengoba uhlelo futhi ezinye izici zayo
Izitshalo Ephakeme: spore nenzalo
Hydroxides Amphoteric - ubunjalo ombaxambili ndaba
Samovidets - kuyinto umbhali wencwadi encwadini yezindaba zemihla ngemihla eyaqala XVII ekhulwini
Kanjani ukugcina mimosa: izeluleko kongoti
"Iresiphi kagogo Agafia". Izibuyekezo izimonyo zemvelo
Amaminithi omhlangano jikelele: izici design
Tefal Ingenio - izinto ezanele ukupheka izitsha zakho ozithandayo
Ngifuna izinwele ezinde: yini okufanele uyenze?
Horse Tubingen eMoscow "Sokolniki", Sparrow Hills, Krylatskoe
Indlela ukupheka esiphundu nezimfanzi isobho ekhaya
Aphumule Krynica: izici kanye nokubuyekeza
Amathiphu zendlela dweba inkukhu ekhaya